‘नेपाली कफीको अन्र्तराष्ट्रिय इज्जत गुमेको छ’ ( अन्तर्वार्ता ) | BUSINESS PATI | Economical Online News Portal
प्रबन्ध निर्देशक, एभरेष्ट कफी मिल प्रालि
१) नेपालमा अहिले कफी क्षेत्रको बजार कस्तो रहेको छ ?
पछिल्ला दिनहरुमा क्याफेहरुको सङख्या बढदै गएको कारण बजार ठिकठिकै छ ।
२) तपाइले कफी उत्पादन तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा निकै अब्बल दर्जाको अनुभव हासिल गरिसक्नु भएको छ । यस क्षेत्रमा काम गर्दाको सुख दुख अलिकति बताइदिनुहोस् न ?
वास्तम्बमा कफीको सुरुवात नै हामीले गरेका हौं । विगतमा जति कठिनाइ भएको थियो कफीको बजार, कफीको उत्पादनका लागि अहिले आएर नेपाली दाजुभाइहरुले गरेको कामकै कारणले नै गर्दा नेपालको अहिले पश्मिनाको जो अवस्था छ त्यही रुपमा कफी व्यवसाय पु¥याएको छ ।
हामीले यसको खेती र बजारीकरण सुरु गर्ने बेलामा कफी, चिया भनेको देशको अर्थतन्त्रसँग गाँसिने कुरा भन्दै सुरुवात गरेका थियौं १९८८ तिरबाट । सुरुवातमा नेपाली कफीको जति अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा माग थियो । अहिले आएर नेपाली कफीलाई गाह्रो बनाइएको छ । हुन त नेपाली बजारमा पनि खपत त भइरहेको छ । चियाको सट्टा कफी र क्याफे खोले यहाँ । अर्को कुरा नेपाली कफी विश्वमा प्रचार भएर मार्केट लिन थाल्ने वेला भएको थियो । टेष्टकै कुरा गर्दा नेपाली कफी हिमाली क्षेत्रको हावामा फलेको कारणले संसारको प्रतिस्पर्धामा राम्रो भन्ने रिजल्ट पनि आएको थियो । विगत ५–६ बर्षको दौरानमा व्यवसायीहरुले पनि र बजारिकण गर्नेहरुले पनि कफी भनेपछि कफी नै हो भन्ने कुरा गरेर आफनो आत्मविश्वास गुमाएको कारणले अहिले अन्र्तराष्टिय बजारमा नेपाली कफी बिक्नलाई गाह«ो भएको छ ।
३) यहाँले यो व्यवसाय कसरी थालनी गर्नुभयो । आफैले खेती गरेर ?
आफुले मात्र होइन् कम्युनिटी बेसिसमा सँगै थालनी गरेका थियौ हामीले । संगोल बनाएर, गु्रप बनाएर, कफी हुनसक्ने गाउँ गाउँमा गएर समुह बनाएर कफीलाई हामीले प्रोडक्सन गरेका थियौ । त्यो कफीलाई चाँही स्वदेश र विदेशमा पठाएर नेपालको कफी हो है भनेर चिनाएका थियौ ।
४)े यो क्षत्रमा अहिले काम गर्ने कति छन् नेपालमा ?
नेपालमा कम्पनीहरु नै भन्दाखेरी पाइनर नै भन्छौ हामी सुरुवातकर्ताहरुलाई । अहिले चाँही कुन कम्पनीले कहाँको कफी किनेको छ थाहा नै हुदैन । च्याउ उमे्रको जसरी कफीको महान ब्यक्ति भन्दै थुप्रै कम्पनी हिजो आज खोलिएका छन् । त्यसले गर्दाखेरी कति व्यवसायी छन् भनेर यकिन गर्नै गाह«ो छ । त्यही इन्र्टनेट र फेसबुक तिर पो हर्नुपर्ने भयो । यसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने नाममा पछिल्लो समय बजारमा आएका ब्यवसायीहरुले नेपालको कफीको इज्जत जिरोमा पु¥याएका छन ।
५) एभरेष्ट कफी मिल एउटा पुरानो कम्पनी । यो अरु कफीहरु भन्दा के कुरामा भिन्न छ ?
भिन्न भन्दाखेरी जसले पनि आफ्नोलाई राम्रो भन्छन् । म चाँही के भन्छु भने कफी भन्ने चीज खरिदकर्ताले राम्रो भन्नुपर्छ । म चाँही पियोर नेपालमा प्रोडक्सन भएको कफी किन्छु । त्यसमाथी मेरो आफ्नै कफी फर्महरु पनि भएकाले नेपाली कफीलाई जोगाएर काम गरेको छु । अर्को बजारिकरणको कुरा गर्दा विगतमा हामीले जापान, कोरिया,अमेरिका, ताइवान लागयत संसारमा पठाउथ्यांै कफी । अहिले आएर मैले जापानमा आउटलेट फर्म बनाएको पनि छु । नेपाली पियोर कफीलाई त्यहाँ आफै यहाँबट निर्यात गर्छु । अरु साथीहरुले पनि आ–आफनो ठाउँबाट गरिरहनु भएको होला । जति विगतमा नेपाली कफीको इज्यत थियो । त्यो घटेको छ । अर्को कुरा अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालीहरुले दुइ कुरा राम्रोसँग सोच्नु पर्छ । एउटा नेपालमा कफी प्रोडक्सन कति गर्ने भन्ने अर्को नेपालको कफीको न्युनतम मुल्य यत्ति है भन्ने । र, बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नीजि क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र मिलेर अघि बढन जरुरी पनि देखिन्छ । संसारमा हामीले कफी पु¥याउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा हाम्रा कफी कै साथीहरुले बोलेको सुन्छु । दुइ ओटा कुरा छन् । डिमान्ड भन्छन् त्यो राम्रो होला । तर त्यसको मुल्य कति त भन्ने कुरा पनि आउनु प¥यो । डिमान्ड चाँही १० हजार टन माग्छन ्भने यहाँ चाँही ३ टन पनि छैन । त्यसले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? जस्तो डिमान्ड अनुसारको रिजनेवल प्राइसमा बेच्नसक्नु प¥यो । नेपालको मुल्य सबैभन्दा महगाें भाको छ । त्यसले गर्दा विदेशीको डिमान्ड र नेपालीले उत्पादन गरेको न्युन कफीको कारणले गर्दामा नेपालमा कफी आफै खुम्चिएर गएको छ ।
५) नेपालको कफीको सुरुवाती चरणको बिजनेस र अहिलेको बिजनेसमा कस्तो भिन्नता पाउनु हुन्छ । अन्र्तराष्टिय रुपमा नेपाली कफीको बिजनेस कस्तो छ अहिले ?
मेरो आफनो ठाउँमा त बिजनेस घटने र बढने त समय अनुसार भइहाल्छ नै । तर सर्भाइभ चाँही भएको छ । म चाँही आफु मात्रै सर्भाइभ भएर होइन् की सम्पुर्ण कफी ब्यवसाय नै सर्भाइभ हुनुप¥यो भन्छु । कृषकलाइ हौसल्ला दिनप¥यो । कृषकबाट नै कफी विग्रार्ने हुन्छ । वर्जिनल कफीमा इन्डियन कफी मिसाएर बेचिदिन्छन् । आफनो खुटट्मा आफै बञ्चरो हानेकोले गाह«ो भएको छ ।
६)नेपालमा कफी व्यवसायबाट कत्तिको रोजगारी सिर्जना र आय आर्जन भएको छ ?
हामीले सुरुवात गर्दाखेरी धेरै कम्पनीहरु थिएनन् । हामीले सुरुवात गर्दा खेरीमै १० देखि १५ हजार कृषकलाई नाफा हामी नै गराउथ्यौ । त्यो भन्दाखेरी १०–१५ परिवारलाई हामीले जागिर दियौ भन्ने होइन । घर घरमा आम्दानी सिर्जना गरायौ । अहिले त लेखाजोखा छैन । जसले सक्छ त्यसैले गर्ने हो । तर राम्रोसँग मिहिनत गर्ने कृषकहरुलाई पनि हिलो छयाप्ने काम भएको छ । कफी रोप्ने कृषकले हो । दुख गर्नेले भन्दा बिचका दलालहरुले बढी फाइदा लुटेका छन् । नेपाली कफीको पहिलेको नाम माटोमा मिलाएका छन । जसले गर्दा यस ब्यवसायमा गाह«ो भएको छ ।
७) अन्त्यमा, नेपालमा कफी खेतीको सम्भावना कस्तो देख्नु हुन्छ ? यस क्षेत्रको आवश्यक विकास एवं विस्तारका लागि सरकारले के गर्न जरुरी देख्नुहुन्छ ?
पहिलो त कफी उत्पादन गर्नका लागि नेपाल सरकारले खाली जमिन प्रइभेट, पार्टनरसीपमा उपलब्ध गराउनु पर्छ । नेपाल सरकार भनेको हामीले आफनो सरकारलाई गाली गरेको जस्तो हुन्छ । सराद्धेको विरालो जस्तो नेपाल सरकार छ । कुनै पनि मन्त्रालयले कृषकको हीतमा काम गरेको छैन । जङगल र जमिनहरु खेर गइरहेका छन । अहिले सम्म त्यहाँ कफी प्लान्टेसन् गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषद र नेपाल सरकार क्याबिनेटले पास गरेको छैन । कफी बिकास वोर्ड आदि भनेर छ । त्यसले केही गर्न सकेको छैन ।
प्रस्तुती : रिसव गौतम/देबी चौलागाँई
प्रकाशित मिति २०७४-३-२९